About Peaceful Truth - BR - Peaceful Truth
Peaceful Truth (ငြိမ်းချမ်းသော အမှန်တရား)အကြောင်း
၁။ ကောလာဟလ အစီရင်ခံခြင်း -
Peaceful Truth ၀ဘ်ဆိုက် အသုံးပြုသူများသည် ကောလာဟလများကို တယ်လီဖုန်းကတဆင့် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့လေ့ကျင့်ပေးထားသော ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့် အစီရင်ခံနိုင်သလို ၀ဘ်ဆိုက်တွင် အကောင့်ဖွင့်ထားပြီး SMS အသုံးပြုကာ လျှို့ဝှက်စွာ အစီရင်ခံစာများ ပေးပို့နိုင်သည်။
၂။ ဦးစားပေး အစီအစဉ် -
တန်းတူအရေးပါသော ကောလာဟလနှစ်ခုဟူ၍ မရှိပါ။ သို့အတွက်ကြောင့် မည်သည့် ကောလာဟလကို ကျွန်ုပ်တို့ အရင်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် ချမှတ်သွားမည်။ WikiRumours ကို အသုံးပြုပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်ဖွယ် စိုးရိမ်ရသော အစီရင်ခံစာကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
၃။ တုံ့ပြန်ချက် -
Peaceful Truth အတွက် သဘောထား တုံ့ပြန်ချက်မှာ အလွန်အရေးပါသည်။ ကောလာဟလအစီရင်ခံသော အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဆက်မပြတ်သော ဆက်ဆံရေးထားရှိရန် လိုအပ်သည်။ ပြဿနာများကို အချိန်မီကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သည့် ပုံစံလည်းဖြစ်သည်။
၄။ စိစစ်အတည်ပြုခြင်း -
ကောလာဟလတစ်ခုကို အရင်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက နောက်တဆင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့က အမှန်တရားကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများစွာရှိပြီး ကောလာဟလအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းအလိုက် အကောင်းဆုံး စိစစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့ပြဿနာများတွင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ သိရှိနိုင်သလို တချို့ကိစ္စများတွင်မူ ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအရင်းမြစ်များနှင့် ရီပို့အစီရင်ခံသူကိုယ်တိုင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပေမည်။
၅။ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း -
နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောလာဟလကို အတည်ပြုခြင်း၊ စဦးအစီရင်ခံစာ ပေးပို့သူထံ အကြောင်းပြန်ခြင်းတို့ကိုသာ ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ဘဲ ကောလာဟလ ပြန့်နှံ့ပြီး ထိခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း သတင်းမှားများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အကြီးအကဲများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များမှာ အရေးပါသူများဖြစ်သည်။
Peaceful Truth လူမှုရေးသံတမန်များ
Peaceful Truth က သတင်းမှားများကြောင့် ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုရေးသံတမန်များက ယင်းကိစ္စဆောင်ရွက်ရန် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆက်ဆံရေး ကွန်ရက်တွင် ၎င်းတို့က လူသားအရင်းအမြစ်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်သူများက သတင်းအချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ အစီရင်ခံတင်ပြရမည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း အကျဉ်းချုံးရေးသားပေးပို့ရမည်။ အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အာရုံထား စောင့်ကြည့်တတ်စေရန် စိတ်ဝင်စားမှုကို တိုးမြှင့်ပေးမည့် သင်တန်းများလည်း ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က စီစဉ်ပေးသွားရန် ရှိသည်။ Peaceful Truth ၀န်ထမ်းများက လူမှုရေးသံတမန်များကို မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုစုံ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု စွမ်းရည် မြင့်မားလာစေရန် ကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင် သတင်းအချက် အလက်များကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုဆောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အတွက် တစ်ဦးချင်းအရည်အသွေးများ မြင့်တက်လာစေရန်လည်ေးကာင်း၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် အလေးအနက်ထားရမည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ထိတွေ့ဆက်ဆံရာတွင်လည်းကောင်း၊ လူထုနှင့် သန့်ရှင်းပြီး ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရင်း ကွန်ရက်ချဲ့ထွင်သွားနိုင်ရန်အတွက် ဒေသတွင်း လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်လည်းကောင်း တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
WikiRumours ဆိုသည်မှာ သတင်းမှားနှင့် လုပ်ကြံသတင်းများကို လျှော့ချပေးသော ၀ဘ်ဆိုက်ဒ်နဲ့ ဖုန်းအခြေပြု နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း ဆော့ဖ်ဝဲမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး MIT လိုင်စင်အောက်တွင် လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စီးပွားရေးအတွက်ပင်ဖြစ်စေ လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီထံမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန် မလိုအပ်ချေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆော့ဖ်ဝဲကို မည်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အသုံးချရန် သုံးစွဲနေကြောင်း ကြားသိချင်ပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် WikiRumours ကို သင်ဘယ်လို အသုံးပြုနေသလဲဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပါ။ WikiRumours မှာ the Sentinel Project. ၏ စိတ်ကူး၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလည်းဖြစ်သည်။
WikiRumours သည် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သလို သတင်းမှား၊ လုပ်ကြံသတင်းများကို တုံ့ပြန်ရန်နှင့် ပဋိပက္ခမဖြစ်ပွားစေရန် အရေးတကြီးဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညွှန်ပြပေးသော စာရင်းအင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ WikiRumours သုံးစွဲရာတွင် သုံးစွဲသူ၏ အခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမည့် အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားထားသည်။
လူထုအဖွဲ့ဝင် ----- ကောလာဟလဆော့ဖ်ဝဲစနစ်ထဲ ၀င်ရောက်ပြီး မှတ်ချက်ပြုပေးနိုင်မည်။
ကိုယ်စားလှယ် ------ ၀ီကီရူးမားနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသူတို့ထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့မှုများ၊ အသံဖိုင်များကို ရယူပြီး သူတို့ကိုယ်စား ဆော့ဖ်ဝဲအတွင်း ၀င်ရောက်ရေးသားရမည်။
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သူ ---------ကောလာဟလအဆင့်အတန်းကို ဦးစားပေးစီစဉ်ရမည်ဖြစ်ပြီး လူထုအတွင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်နိုင်သူ၊ ကောလာဟလသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြနိုင်သူ
လူထုဆက်ဆံရေး ----- ကောလာဟလသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြနိုင်သူ
စီံမံခန့်ခွဲသူ -------ကောလာဟလသတင်းများ၊ သုံးစွဲသူများနှင့် ၀ဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များ စသည်တို့ကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းအတာအဆင့်များကို မှန်ကန်အောင် ပြောင်း
Rumour reporting – Peaceful Truth subscribers can sign up and report rumours anonymously using SMS, though they can also do so through phone calls or by contacting one of the community ambassadors we have trained.
Prioritization – No two rumours are created equal, so we have to prioritize which ones we address first. This isaprocess we will focus on perfecting and managing through WikiRumours, with any reports concerning violence taking precedence.
Feedback – Responsiveness is important for Peaceful Truth and we need to constantly communicate with subscribers who report rumours. This builds trust by demonstrating that we are taking action inatimely manner.
Peaceful Truth Community Ambassadors
Peaceful Truth aims to mitigate the harmful effects of misinformation, and our community ambassadors playakey role in this process. They serve as the human element in this humanitarian communication network. Participants are briefed on methods of reporting information accurately, and our ongoing training promotes keen observation and attention to detail when reporting. Their ability to compile and retain meaningful and relevant information so ensures that Peaceful Truth can act on reliable information.
Peaceful Truth staff supports community ambassadors as they develop their skills in cultural adaptation, so that they are able to work with people from diverse cultural and geographical backgrounds. This will enable them to report on as wide an accumulation of information as possible. They are also encouraged to foster their interpersonal skills, tapping into their respective communities through their networks of family and friends, and reaching out through local social functions to broaden their networks, all while maintaining strong and healthy relationships with community members.